I-Glazed Alumina Metallized Ceramic Cylinder China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-metallized ceramics > I-Metallized Tube ye-Ceramic > I-Glazed Alumina Metallized Ceramic Cylinder
Le cylinder ensimbi ensimbi isetshenziselwa ukushintshashintsha umshini, ukuphazamisa ukuphuma kwegesi, i-breaker vacuum. Yenziwe ngamaminithi. I-95% i-alumina ngokucindezela okumile, i-ceramic injection molding, noma ukucindezela okushisayo. Siyakwazi ukwakha ukuhlukahluka kwezinto ezihlukahlukene zethusi ensimbi yoceramic, kufaka phakathi ubukhulu obuhlukene, uhlobo oluhlukile, ukumbozwa kwesimbi okuhlukile phezu kwendawo.
1. I- ceramic enkulu + ye-Mo / Mn metallization 2. I- ceramic ephezulu + ye-ag yokugqoka 3. I- ceramic ephezulu + W ukwakha i-metallization + Au-coating
4. I- ceramic ephezulu + Mo / Mn metallization + Isigqoko se-Nickle
Siyakwazi ukuhlinzeka ngamathuluzi e-ceramic ekhonjiwe ngokucophelela ngezindlela ezihlukahlukene zokugaya, ukuchithwa kwe-CNC, izinqubo zokusika. Ukubekezelelana okungcono kakhulu kungaba +/- 0.001 ngobude, +/- 0.0051 ububanzi obungaphakathi nangaphandle .